SQ Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Ebla 6, 2019 – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooSQ Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Ebla 6, 2019
SQ Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Ebla 6, 2019
Oromoon Amboo Keessaa Sanyiin #Jaagamaa Badhaanee Irbuu Hin Ganu, Waadaan Waadaadha!
ODP Baajata guddaa dhangalaastee maaliif Amboo keessatti ayyaana kana kabajuuf bobbaate?.
“Qabsoo birmaddummaa Oromoo xumuree…”, jedhe tokko. Qabsoon Oromiyaa Birmaddummaa mitii Bilisummaarrayyuu hin geenye. Dubbiin durgoon dubbatan booda gaabbii qaba. Hojiin ODP irratti xiyyeeffattee magaalaa Amboo maadhee godhachuu barbaaddu inni guddaan ilaalcha jaarmayaa ishii facaasuufi kaayyoo #Jaagamaa Badhaaneefaa naaffisuuf, abadan hin milkooftu. Gaaffii ummata Oromoo dhiigaafi lafee meeqa itti dhabne arrabaan damma roobsaa, duubaan ammoo boolla qilillee qabsoo Bilisummaa Oromoorratti qotaa jirti ODP. Kunis hin milkaa’u. Gaaffiin ummata Oromoo gaaffii gola tokko misoomsuu, gola tokko guddisuu miti. Gaaffii Abbaa biyyummaa mirkaneeffachuu, walabummaa biyyaa ijaaruudha. Kanaafis ODP’n gaaffii gaafannu hin qabnu. Biyya keenya saamamne dhiigaafi lafee itti gabbarreen deebifanna. Gatii dhiigaafi lafee ilmaan keenyaatis wareega kaffallee nii tiksina, Kaayyoo isaaniitis galiin nii geenya.
ODP/OPDO’n tokkummaa ummata Oromoo caccabsitee akka rirmaa nyaattee balleessitee jaarmayaa ADWUI’n hundeen dhaabuuf hojjetti. Qabsaa’onni Qabsoo Bilisummaa Oromoo ammoo labataa, labatatti lubbuu aarsaa wareegaa Abbaa biyyummaa Oromoofi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf halkan guyyaa boqonnaa dhabu, ittis if wareegu.
Sagaagalummaan siyaasaa OPDO’n paartii nafxanyaa waliin dalagdus dantaa ummata Oromoo kabachiisuuf odoo hin taane dantaa jaarmayaa “Wayyaanee” san bakkatti hundeen dhaabuuf. Kun nii tahaaree Oromooko?, matumaa hin tahu. Kanaaf, gatii jaallewwan kaleessaa kabajuun of kabajuudha, wal kabajuudha, waadaa kabajuudha.
Sobaafi sossobbaan OPDO boodatti nu harkisa malee fuuldura nun tarkaanfachiisu.
SQ Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Ebla 20, 2018